Dagaal dhimasho iyo dhaawac gaystay oo ka dhacay degmada Xaradheere. [Akhris …] – Radio Daljir
Dagaal dhimasho iyo dhaawac gaystay oo ka dhacay degmada Xaradheere. [Akhris …]
Xaradhere, Aug 08 – Dagaallo xooggan oo gaystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iskugu jirta ayaa shalay iyo xalay fiidkiiba ka dhacay gudaha iyo daafaha degmada Xaradheer oo ka tirsan gobolka Mudug.
Dagaallada ayaa sida la sheegay galaaftay nolasha dad ka badan 10 qof oo iskugu jira dhinacyadii dirirtu u dhaxaysay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan sida ay sheegayaan dadka deegaanka oo idaacadda Daljir ay khadka teleefoonka kula xiriirtay.
Dagaallada ayaa u dhaxeeya labo beelood oo deegaankaasi wada dega, waxaana wararku tilmaamayaan mid ka mid ah beelahaas hadda in ay gacanta ku haysto degmada Xaradheere oo ay ku awood roonaatay, inkastoo wali xiisaddu taagan tahay.
Xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana wali deegaankaasi ka socda abaabul iyo hub uruursi xooggan oo labada dhinac ku damacsan-yihiin in ay sii wadaan dagaalka.
Wixii ka soo kordha dagaalladaasi saacadaha soo socda ayaan idiin soo gudbin doonaa.